AMSI GL62M 7REX - ကနေစျေးနှုန်း 1252 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို), ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ » မှတ်ချက်စာအုပ် » AMSI GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို)
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှတ်ချက်စာအုပ်AMSI GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇွန်လ 2019 19 10: 57
စျေးနှုန်းသမိုင်းကို MSI GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို
€ 1.164,43 - 2018 18 သြဂုတ်လ
€ 758,45 - 20189သြဂုတ်လ
€ 749,52 - 20184သြဂုတ်လ
€ 758,45 - 2018 13 ဇူလိုင်လ
€ 1.164,43 - 2018 23 ဇွန်လ
မှ: ဇွန်လ 2018 23
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 1.164,43 - 2018 23 ဇွန်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 749,52 - 20184သြဂုတ်လ
MSI သည် GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို
တစ်ဦးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး 15.6 လက်မ FHD display ကို LED, မှပံ့ပိုးသည် Intel Core i7-7700HQ အတူဒီဇိုင်း Processor, HDMI output, featuring Nvidia GeForce GTX1050 တီ GDDR5 ဂရပ်ဖစ်, ဤအရာအားလုံးကိုဂိမ်းကစားဂိမ်းကြီးစိုးများအတွက်အပြည့်အဝ suite ကိုပေးခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားအမှန်တကယ်ချောမွေ့စွာဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
● Nvidia GeForce GTX1050 တီ GDDR5 ဂရစ်ဖစ်
ချောချောမွေ့မွေ့အားလုံးတပြိုင်နက်သင့်ရဲ့ဂိမ်း, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယို-တည်းဖြတ်ရေး applications များအဖြစ်မျိုးစုံအစီအစဉ်များနှင့် browser ကို tabs များ run ဖို့သိသိသာသာမြင့်မားသော bandwidth ကို RAM က
● 1TB HDD သိုလှောင်စွမ်းဆောင်ရည်
graphic chipset: GTX1050Ti
မော်ဒယ်: GL62M 7REX - 1252
ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်: 128GB မှတက် SD ကဒ် (မပါ)
Hard Disk ကို Interface အမျိုးအစား: M.2, SATA 3.0
Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 1T
အလှည့်မြန်နှုန်း: 7200R / M က
အချိန် .: 3-4 နာရီအားသွင်း
standby အချိန်: 4-5 နာရီ
package အရွယ်အစား: 50.00 x ကို 45.00 x ကို 20.00 စင်တီမီတာ / 19.69 x ကို 17.72 x ကို 7.87 လက်မ
package အလေးချိန်: 4.4180 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 38.50 x ကို 25.50 x ကို 2.50 စင်တီမီတာ / 15.16 x ကို 10.04 x ကို 0.98 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 2.2000 ကီလိုဂရမ်
MSI သည် GL62M 7REX ဂိမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, FPS, အပူ & Surface က Temp
အာဏာအရှိဆုံးစျေးပေါတဲ့ Gaming Laptop ကို? MSI သည် GL62M-7REX ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Kaby ရေကန်, 1050TI
AMSI GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို) ဗီဒီယိုများ
€ 1.304,98 - 2018 18 သြဂုတ်လ
€ 849,99 - 20189သြဂုတ်လ
€ 839,99 - 20184သြဂုတ်လ
€ 849,99 - 2018 13 ဇူလိုင်လ
€ 1.304,98 - 2018 23 ဇွန်လ
62 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-1252HQ, GTX7Ti 7700GB, 1050GB RAM ကို) - AMSI GL4M 8REX "ဒီထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုမှပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Teclast F7 လက်တော့ (6GB RAM ကို 128GB SSD ကို)
Xiaomi က Mi9အရှေ့တောင်စမတ်ဖုန်း